Tsy misy vahaolana ny delestazy : ritra i Mantasoa, maina Andekaleka | NewsMada
Tsy misy vahaolana ny delestazy : ritra i Mantasoa, maina Andekaleka
Izao vao taitra! Hatreto, tsy misy ny vahaolana akaiky hamahana ny delestazy eto Antananarivo sy ny manodidina, toy ny efa fahita an-taony maro any amin’ny faritra ho an’ireo milina termika mandeha amin’ny gazoala. Tena fototry ny olana ny tsy fahampian’ny rano manodina ny milina any Andekaleka sy Mandraka. Ambany ny tosiky ny rano any Andekaleka, tsy misy afa-tsy 15 m3/s raha toa ka 60 m3/s ny tosika afaka manodina ireo gropy telo manana tanjaka 92 MW. Tsy afaka mamokatra afa-tsy 30 MW (ny 1/3-ny) sisa amin’ny antoandro ary 60 MW amin’ny hariva sy ny maraina.
Mamokatra herinaratra 24 MW ny any Mandraka, vatsin’ny farihin’i Mantasoa. Ritra koa ity farihy lehibe ity, izay tsy fahita hatramin’izay, ka zara raha afaka mamokatra herinaratra 5 MW sisa ny any Mandraka.
Inefatra nandatsaka orana tsy voajanahary ny fanjakana sy ny Jirama, saingy tsy nahomby. Tsy nisy orana nilatsaka tany amin’ny manodidina an’Andekaleka tato anatin’ny herinandro. Voalaza fa efa tratra ny haavon’ny rano tany amin’ireo toerana ireo, tamin’ny taon-dasa toy izao.
Manoloana ireo, mitazam-pontsiny ny fanjakana. Raha ritra ny loharano, tsy nisy delestazy nandritra ny fivoriamben’ny Frankofonia. Toa sanatria mandatsa ny Banky iraisam-pirenena, milaza fa “ny 15%-n’ny Malagasy ihany ny manjifa ny Jirama”.